macOS Big Sur 11.3.1 dia misy ary manamboatra lesoka fiarovana | Avy amin'ny mac aho
macOS Big Sur 11.3.1 dia misy izao ary manamboatra lesoka amin'ny fiarovana
Ny orinasa Cupertino omaly dia nanangana kinova macOS Big Sur vaovao ho an'ny mpampiasa rehetra, amin'ity tranga ity dia ny kinova 11.3.1 fa tsy teo ihany izany fa namoaka kinova vaovao an'ny iOS 14.5.1 ary iray hafa amin'ny watchOS 7.4.1.
Amin'ity tranga ity dia hifantoka amin'ilay kinova macOS Bic Sur vaovao isika, ity kinova vaovao ity dia mamaha "olana lehibe iray amin'ny fiarovana" hoy i Apple ka ho tonga ny fotoana hanavaozana ny rafitra miasa haingana araka izay tratra.
Mpampiasa maro no manenina fa taorian'ny kinova beta maro be dia nisy fanavaozana hafa navoaka, saingy mitovy tanteraka ny zava-nitranga raha fantatra fa namoaka fanavaozana ho antsika ny orinasa Cupertino satria fantatsika fa manana olana na lesoka amin'ny fiarovana izany. Ilaina ny mitadidy fa maimaim-poana ireo fanavaozana vaovao rehetra ireo ary aza manelingelina ny mpampiasa, mihoatra ny fotoana very maina amin'ny fametrahana azy ireo, saingy azo atao amin'ny alina ary mandeha ho azy izany mba tsy hanelingelina azy, fa ny mifanohitra amin'izany satria mamaha ny lesoka izy ireo ary miaro ny solosaina amin'ny fahalemena hita.
Marihina fa ny orinasa Cupertino koa dia namoaka ny iOS 14.5.1 sy ny iOS 12.5.3, kinova taloha izay misy fanatsarana ny fiarovana ihany koa ary Apple dia manolo-kevitra ny hanavao faran'izay haingana. Mety tsy hiala amin'ilay macOS Big Sur 11.3.1 vaovao ianao amin'izay Manolo-kevitra ny hanery mivantana ny fanavaozana avy amin'ny Preferensi System - Fanavaozana ny lozisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » macOS Big Sur 11.3.1 dia misy izao ary manamboatra lesoka amin'ny fiarovana
Ny mahasosotra ahy dia ny manamboatra zavatra iray ary manimba ny 3, taloha ao amin'ny YouTube amin'ny safari raha toa ka navelanao teo ambonin'ireo sary kely momba ny sary ny totozy dia hahita topi-maso 4 segondra ianao, satria izao dia tsy manao na inona na inona.
Vonona ny TSMT hanana ny efijery miniLED ho an'ny MacBook Pro vaovao vonona amin'ny faran'ny 2021
Microsoft Teams ho an'ny macOS tsy ho ela dia hanampy fanampiana amin'ny firaketana ho azy